यी हुन सुर्खेत कांग्रेसका सभापतिका दाबेदार ? – Sitalpati
यी हुन सुर्खेत कांग्रेसका सभापतिका दाबेदार ?
सितलपाटी संवाददाता २०७८, १० मंसिर शुक्रबार
सुर्खेत । नेपाली कांगे्रसको जिल्ला अधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षीहरुको चर्चा शुरु हुन थालेको छ । सभापतिका लागि पूर्व जिल्ला पार्टी सचिव श्याम भारती, क्षेत्र नं १ का पूर्व क्षेत्रीय सभापति खड्क पोखरेल र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देवकुमार सुवेदी, पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्रबहादुर थापा सर्वाधिक चर्चामा छन् ।
सुर्खेतको कांगे्रस राजनीतिमा विगतमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानी समूहबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने गरेको थियो । यसपटक क्षेत्रीय सभापतिसहित महाधिवेशन प्रतिनिधिमा थानी समूह क्लिन स्विप हुँदा खड्का पक्षलाई सभापति लगायतका पदका आकांक्षी मिलाउन हम्मेहम्मे छ । दुई समूहबीच मतदाताको भारी अन्तर हुनु र थानी समूहभित्र सभापतिको आफ्नै उम्मेदवार नहुँदा यसपटक सहजै जित्न सकिने हुँदा खड्का समूहमा आकांक्षी बढी देखिएका हुन । यद्यपि अहिलेसम्म महामन्त्री खड्काले कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने’bout मुख खोलेका छैनन । खड्काले आश्वासन नदिएपछि आकांक्षीहरु सहमति जुटाउन आपसमा छलफल गरिरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
खड्का समूहमा सभापतिका लागि वीरेन्द्रनगर ४ का स्थायी बासिन्दा पूर्व पार्टी सचिव श्याम भारतीलाई बनाउन लबिइङ भइरहेको छ । भारती कांगे्रसभित्र मिलनसार र परिपक्व राजनीतिज्ञका रुपमा परिचित छन् । त्यस्तै मेयरद्धय सुवेदी र थापा पनि सफल जनप्रतिनिधि मानिन्छन । उनले यसपटक महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सर्वाधिक मत ल्याए । अघिल्लोपटकको महाधिवेशनमा थानी खेमामा रहेका उनी पछिल्ला वर्ष यता खेमा परिवर्तन गरेपछि विशेषगरी वीरेन्द्रनगरमा खड्का समूह बलियो बन्दै गएको हो । सुवेदीले खेमा परिवर्तन गरेपछि क्षेत्र नं २ मा आफूहरुलाई प्रभाव विस्तार गर्न सजिलो भएको स्वयं खड्का समूहका नेताहरुले बताउने गरेका छन् ।
सभापति पदका लागि पूर्व पार्टी सचिव भारती र पूर्व क्षेत्रीय सभापति पोखरेल, मेयरद्धय सुवेदी र थापाका साथै तीर्थजंग शाही, विष्णुबहादुर खड्का, कालीप्रसाद शाक्य, टोपबहादुर रावत, यज्ञबहादुर विसी, नारायण सापकाेटा पनि सभापति पाउनुपर्ने कसरतमा छन् । रावत पार्टी सचिव र वीसी निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री हुन् । त्यस्तै यही मंसिर १६ र १७ गते हुने प्रदेश अधिवेशनका लागि पनि आकांक्षीहरुले दौडधुप बढाएका छन् । खड्का समूहबाट प्रदेश महामन्त्रीका लागि नेपाल तरुण दलका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष निरञ्जन केसी बलियो दाबेदारमा मानिन्छन ।